Alahady 29 Septambra 2019. – FJKM
Alahady 29 Septambra 2019.
Fandalinana ny Boky SALAMO
Fiantsoana hidera (and1)
Hira fiderana manandratra ny Tompo Mpanjaka no hitantsika eto , tsy eo amin’ Israely ihany fa amin’ireo firenen-tsamihafa maneran-tany . Mahafaoka ny olombelona rehetra ny teny hoe: « vahoaka »eto . Taomina mba hiteha-tànana izy ireo ho fanehoam-pifaliana .
Noresen’ Andriamanitra ireo firenena(and 2-6)
Ambara fa Izy no « Avo indrindra sy Mpanjaka lehibe ambonin’ny tany » (and2) . Entina hanehoana izany fa tsy misy azo ampitahaina Aminy . Izy no filoha mpitarika ka mampanaiky ho eo ambanin’ny tongony ireo firenen-tsamihafa (and 2,3) . Sary hanehoana ny fandresena izany .
Andriamanitra no Mpanjakan’ny tany rehetra (and7-9)
Asaina mankalaza an’ Andriamanitra ny vahoaka sy ireo firenen-tsamihafa satria Mpanjakan’ny tany rehetra Izy (and7) . Manerana izao rehetra izao ny fanjakany . Eo amin’ny seza fiandrianany any an-danitra no anjakan’ny Tompo amin’ny firenen-drehetra (and8).Tena zava-dehibe ny fiderana ny Tompo amin’ny maha-Mpanjaka Azy eo amin’ny fiainantsika .
« Raiso ny Tenin’ Andriamanitra » Boky faha-7